बुटवल कोरोना अस्पताल : फ्रन्टलाईनका यी ४ कमाण्डर
विकाश पराजुली बुटवल, १३ असार
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज ज्योति पौडेल । अहिले कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई आत्मबल बढाउने टिप्स दिन्छिन् । औषधिमुलो गर्छिन् । अरू नर्सहरूलाई काम गर्न प्रेरित गर्छिन् । नर्सिङ क्षेत्रमा नआएको भए कहाँ हुनुन्थ्यो होला अहिले ? पहिलो प्रश्न थियो यो ज्यातिलाई । उनले भनिन्, 'मेडिकल सेक्टरमै कतै हुन्थे सायद ।'
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको महामारीको समयमा ‘फ्रन्टलाइन’मा अर्थात् जोखिम मोलेरै काम गरिरहेकी ज्योति पौडेल केही वर्षयता बुटवलको प्रादेशिक अस्पतालमा छन् । हिम्मतवाली ज्योति अहिले जोखिमको प्रभाह नगरी कोरोना संक्रमितको उपचारमा लागि परेकी छिन् ।
क्वाटरमा ११ महिने बच्चा देवर र नन्दले हेर्ने गर्दछन् । बिहानदेखि साँझसम्म ज्योति कोरोना अस्पतालमै व्यस्त हुन्छिन् । साँझ क्वारटमै पुग्छिन् । काठमाडौंबाट बीएस्ससी नसिङ उत्तीर्ण गरी २०७१ सालदेखि सातौं तह (अधिकृत) को रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत ज्योति अहिले कोरोना विशेष अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज हुन् । सुरुमा वार्ड इन्चार्ज रहेकी ज्योति गत माघ बाट नर्सिङ इन्चार्ज भएकी हुन् ।
'सुरुमा जहाँतहीँ डर थियो । मलाई पनि डर नहुने कुरै भएन् । कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने स्टाफसमेत पाउन ग्राहो हुन्थ्यो, आएकाहरूले पनि छाड्थे । पछि विस्तारै सबै ठीक हुँदैगयो' ज्योति भन्छिन्, 'मेरो सामाजिक दायित्व पनि छ, म तर्केर बस्ने अवस्था हुन्थेन । त्यसैले हिम्मतका साथ सेवामा लागेँ । नाई भन्ने कुरै भएन । मेरो पेसागत मर्यादाले पनि दिन्न ।'
हिम्मतवाली आईसियू ईन्चार्ज कमला
३० जेठमा बुटवलको कोरोना विषेश अस्पतालमा आईसीयूको भेन्टिलेटर उपचार गराइरहेका कपिलवस्तु नगरपालिका १२ का २२ वर्षीय पुरुष अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । १४ जेठमा अचेत अवस्थामा कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइएका उनलाई चिकित्सकको टोलीले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेको थियो ।
अस्पतालमा ल्याएपछि उनलाई २ दिन भेन्टिलेटरमा राखिएको र स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि मात्र आईसीयूमा राखिएको थियो । त्यी जटिल अवस्था रहेकाले उनको उपचारमा विशेषज्ञसहित ५ जना स्वास्थ्यकर्मी खटेका थिए ।
कपिलवस्तुबाट आईसियूमा राख्नु पर्ने केस आउन थालेको खबर आउनसाथ आईसियू ईन्चार्ज कमला ज्ञवालीले नर्सिङ ईन्चार्ज ज्योति पौडेलसँग सल्लाह गरिन् । त्यी कपिलवस्तुका युवा जेठ पहिलो साता भारतको मुम्बईबाट आएका थिए । संक्रमित भेन्टिलेरमा जाँदा प्रत्यक्ष बिरामीसँग सम्पर्क गर्नुपर्दथ्यो । बिरामीको दिसा, पिसाब फेर्दा आईसियूको काम गर्ने चिकित्सको टोली र सहयोगीले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
नयाँ अस्पताल, त्यसमाथी नयाँ सेटिङ केही डर भए पनि कमलाले आत्मबल बढाइन् । तयारी गर्दागर्दै सुरुमा को जाने भन्ने भयो । पहिलो केस भएकाले कमलाले त्यो सबैको व्यवस्थापन गरिन । बिरामीलाई भेन्टिलेटमा राखियो । कमला ज्ञवाली, विष्णु पन्तसहितको टिम पूरै २ दिन भेन्टिलेरमा उनको उपचारका लागि खटियो ।
'संक्रमित आइसोलेनमा बस्दा हुने मोटिभेसनलभन्दा पक्कै पनि यो भेन्टिलेर केश फरक हो' उनले भनिन्, 'अस्पतालमा आउँदा सुरुका केही दिनमा डर भए पनि भेन्टिलेरमा समेत उपचार गर्दा केही डर भएन ।'
आईसीयूकी ईन्चार्ज रहेकी कमला अरूको ड्युटीसमेत मिलाउनुपर्छ । आईसीयूमा काम गर्ने सबैले क्रिटिकल केयर तालिम लिएका कारण उपचारमा सहज भएको उनको अनुभव छ । १४ दिन लगातार काम, अनि १४ दिन क्वारेन्टाइन । त्योबीचमा पीसीआर परीक्षण अनि पुनः प्रादेशिकको आईसीयूमा ड्युटी खटाउने काम कमलाले गर्छिन् । १२ जना नर्स र ६ जना सहयोगीको तालिका बनाउने, काममा खटाउने । आवश्यक समन्वय अस्पतालका मेसु, अध्यक्ष, फोकल पर्सनसँग गर्ने काम कमलाले गर्छिन् ।
सुख्खानगरमा बस्ने कमला कोरोना अस्पतालमा ड्यूटी परेको परिवारलाई थाहा हुँदा बच्चा र श्रीमानसमेत स्तव्ध भएका थिए । सकेसम्म नगए हुन्थ्यो भन्ने भाव परिवारले दर्शाएको कमला बताउँछिन् ।
बहिनीसँग रुदारुँदै आईसीयू हिँडेकी विष्णु
बुटवलको धागो कारानामा रहेको १३ जेठको नाइट ड्युटी गरेर विष्णु पन्त सुख्खानगर कोठामा गइन् । आईसीयूमा काम गर्ने विष्णु त्यो दिनसम्म कोही पनि प्यासेन्ट नभएका कारण कोठाबाटै ड्यटी आउँजाउ गर्थिन् । नाइट ड्यटी गरेकी विष्णु बिहानै घर गइन् । विष्णु बहिनीसँग सुख्खानगरमा बस्थिन् । मोबाइल अफ थियो । ड्युटी सकेर घर पुगेकी विष्णुकी बहिनीको मोबाइलमा कोरोना अस्पतालकी नर्सिङ ईन्चार्ज ज्योतिको फोन आयो ।
फोनमा ज्योतिले 'कपिलवस्तुको कोरोना पोजेटिभ केस भेन्टिलेरमा आउँदै छ, तपाई तुरुन्त आउनुपर्ने भयो' भनेर भनिन् । त्यसपछि विष्णुलाई त्यो सुन्नसाथ अर्कै लाग्यो । भर्खर ड्यटी सकेर कोठा आएकी विष्णु पहिलो केस 'फेस' गर्न अस्पतालमा जानुपर्ने भयो । नजिकै रहेकी बहिनीलाई घटनाक्रम सुनाइन् । कोठाबाटै निस्कन लाग्दा बहिनी धुरुधुरु रोइन । विष्णुको पनि आशु रोकिएन् ।
'कोरोनाको उपचार गर्न गएपछि ड्यटी, क्वारेन्टाइनमा बस्दा डेढ, २ महिना लाग्ने मानेर होला बहिनी रोइन । अनि म पनि आशु रोक्न सकिने' पन्तले भनिन्, 'फोन आउन साथ अस्पतालमा आउनुपर्ने भयो । श्रीमान्, बुवा आमा कसैलाई पनि भन्न भ्याइन । मोबाइल पनि अफ थियो ।'
विष्णु कोठाबाट अस्पतालमा आइपुग्दा बिरामीलाई आईसीयूमा लगिँदै थियो । आईसींयूमा कोही पनि प्यासेन्ट नभएकाले सामानसमेत केही थिएन । विष्णु, कमला, ज्योतिको टिमले सामान तयार गर्नतर्फ लाग्यो । पीपीई लगाउने तालिम लिएको भए पनि त्यो दिन विष्णुलाई १५ मिनेट पीपीई लगाउन समय लागेको उनी सम्झिन्छिन् ।
'डरले हो कि के हो खई पीपीई लगाउनसमेत समय लाग्यो । त्यसपछि बिरामीको प्रेसर जाँच गरियो । प्रेसर कम थियो । औषधि चलाइयो' उनले भनिन् । जेठ १४ गते राति अबेरसम्म ड्यटी रहेकी विष्णु साँझ होटलमा बास बस्न गइन । हतार हतार कोठाबाट निस्केकी उनले ल्याउन छाडेका कपडा बहिनीले गेटमा ल्याएर छाडेकी रहिछन् । त्यहि कपडाको झोला टिपेर होटलमा बस्न थालिन् । यो क्रम १४ दिनसम्म रह्यो ।
भेन्टिलेटरमा राखेर होस आउन थालेपछि बिरामी भेन्टिलेटरमा फाईट गर्न थाल्यो । त्यहाँ रहेका विष्णु र अरू साथीलाई बिरामीको केयर गरे । विष्णु र कमलासहितको टिमको रेखदेखले बिरामीलाई १४ दिनमा घर फर्काउन सफल भए ।
'गर्मी, त्यसमाथि पीपीई, एन-९५ मास्क, चस्मा लगाएर काम गर्दा कति गाह्रो भयो । ६ घण्टा पीपीई लगाएर काम गरियो । न कतै चलाउनु, न छुनु, न त बाथरुम जानु । यसरी पनि काम गरियो । अहिले धेरै सहज छ । सजिलो हुँदै गएको छ' उनले भनिन् । नवलपरासीकी विष्णु ३ वर्षदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।
त्यहि दिन अर्घाखाँचीको एउटा केश आईसियूमा आयो । आरडीटी परीक्षण टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएका बिरामीलाई एम्बुलेन्सले सीधै कोरोना अस्पतालको आइसीयूमा ल्याए । त्यो बिरामीलाई पनि विष्णुकै टोलीले उपचार गर्‍यो ।
धागो कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालको आईसोलेसन ईन्चार्ज हुन स्वणीम क्षत्री । भैरहवाकी स्वणीम चैत महिनादेखि कोरोना अस्पतालमा कार्यरत छिन् । उनी करार सेवामा अस्पतालमा आएकी हुन् । बैंग्लोरुबाट बीएससी नर्सिङ गरेकी स्वणीम अहिले आईसोलेसन ईन्चार्जका रूपमा काम गरेकी छन् । अस्पतालमा आउने संक्रमितलाई आत्मबल बढाउने टिप्स र औषधि उपचार गर्न स्वणीमको टिम लाग्ने गर्दछ ।
स्वणीमकी माईजू अमेरिकामा छिन्, नर्सिङ क्षेत्रमै । कोरोनाको महामारीमा माईजूले पनि उपचारमा संलग्न भएका कारण आफूलाई आईसोलेसनमा काम गर्दा परिवारबाट सपोर्ट भएको स्वणीम बताउँछिन् । 'यो मेरो च्वाईसले पनि खाएको जागिर हो । त्यसैले डर भए पनि हटाएर अस्पतालमा सेवाका लागि आएकी हुँ' उनले भनिन् ।
बिहान १० देखि ५ बजेसम्म ड्यटी गर्छिन्, स्वणीमले । त्यसपछि अरू व्यवस्थापनमा खटिन्छिन् । आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहोका लागि अस्पतालका मेसु राजेन्द्र खनाल, अध्यक्ष सूर्य भट्टाराई, कोरोना फोकल पर्सन डा. सुर्दशन थापासँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छिन् । आईसोलेसनमा अन्य नर्स, प्यारामेडिक पर्सनहरू पनि छन् । १४ दिन निरन्तर काम, १४ दिन क्वारेन्टाइन त्यसपछि पीसीआर परीक्षण गरिन्छ । आइसोलेसनमा काम गर्नेहरूलाई अस्पतालमा बस्नका लागि छुट्टै व्यवस्था अस्पताल विकास समितिले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १३, २०७७, १३:२०:००
बैठक नै नबसी प्रदेश ५ का सांसदले बुझे इन्धन खर्च
प्रदेश ५ मा ३४.८ प्रतिशत रोपाइँ
बझाङ पहिरो अपडेट : एकै परिवारका ३ जनाको शव फेला
गण्डकीमा शनिबार थप ९ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ११ सय नजिक
अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएकी महिलाको शव हस्पिटलमै अलपत्र
त्रिभुवन विमानस्थलबाट आज ११ अन्तर्राष्ट्रिय उडान